व्यवसायीले बस नथपे स्कुल–कलेजको बसमार्फत यात्रु घर जान पाउने
काठमाडौं । दसैँ सुरु भएसँगै उपत्यकाबाट बाहिरिनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । नागढुंगा नाकाबाट नियमितभन्दा १० हजार बढी यात्रु बाहिरिन थालेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । ‘सामान्य अवस्थामा २५–२६..
आर्थिक चलखेल गर्दै सेटिङमा विदेशीलाई भिसा
काठमाडौं । अध्यागमन विभागबाट विदेशीलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) दिने प्रक्रियामा रकर्ड नै नराखी आर्थिक चलखेल गरेको पाइएको छ । असोज ६ गते साउदी अरेबियन नागरिक अल्जरिन्द मोहमद हुसेनलाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानास्थलस्थित अध्यागमन..
काठमाडौं । यसपालि दसैँ मनाउन काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जाने सर्वसाधारणलाई समस्या हुने भएको छ । यातायात व्यवसायीका कारण सार्वजनिक यातायातमार्फत बाहिर जाने करिब आठ लाख सर्वसाधारणले अझै टिकट पाएका छैनन्..
सांसद सुविधा ह्वात्त बढ्दै
काठमाठौं । सरकारले साउन १ देखि नै लागू हुने गरी सांसदहरूको घरभाडा तथा पत्रपत्रिकालगायत सुविधाबापतको भत्तामा भारी वृद्धि गर्ने भएको छ । मासिक ५४ हजार २ सय ९बैठक भत्ता र..
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा साढे १६ अर्ब रुपैयाँबराबरका सवारीसाधन नेपाल भित्रिएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार यो रकम अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बर हो ।..
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रकमको २५.४ प्रतिशत हिस्सा विदेश जाँदा लागेको ऋण तिर्न प्रयोग हुने गरेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका २ सय २०..
काठमाडौ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा १ सय २२ करदाता ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत सूचीकृत भएका छन् । असार मसान्तसम्म मुलुकमा ठूला करदाताको संख्या ८ सय ८२ थियो । आव..
पशुपतिमा श्राद्ध : दक्षिणाले यजमान आजित
काठमाडौं । आज बोहनी नै भएन, सोह्र श्राद्धमा पितृलाई पिण्डसहित तार्न पशुपति आउने यजमान आफूकहाँ नआएपछि आसन कसेर बसेका ब्राह्मणबीच प्रचलित संवादको यस वाक्यले ब्राह्मणहरू पितृको उद्धार गर्न आसन जमाएका..
काठमाडौं । बुङमतिस्थित रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर जीर्णेद्धारका क्रममा मन्दिर मुनि नवरत्न, असर्फी र चाँदीका सिक्का पाइएको छ । सुनको पद्यमाणि लोकेश्वरकोे मूर्ती पनि सोही स्थानमा पाइएको छ । मन्दिरका चार कुनामा..
विश्व बैंकले दियो शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयलाई चेतावनी
काठमाडौं । डेढ वर्ष अघिदेखि सुरु गर्ने सम्झौता भएको शिक्षाको झन्डै साढे ६ अर्बको ‘उच्च शिक्षा सुधार परियोजना’ धरापमा परेको छ । उच्च शिक्षा परियोजना सञ्चालन भएको झन्डै डेढ वर्षसम्म..
कुनै पदक नजितेको रियो ओलम्पिकमा नेपालको खर्च १ करोड १६ लाख
काठमाडौं । ब्राजिलको रियो दी जेनेरियोमा सम्पन्न ३१औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा नेपाली टोलीको कुल खर्च एक करोड १६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ भएको देखिएको छ। तर, नेपाल ओलम्पिक कमिटी ९एनओसी०ले रियो ओलम्पिकमा..
कुन नोट, कति खर्चमा छाप्छ राष्ट्र बैंकले ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो पटकको तुलनामा यसपटक सस्तो दरमा नोट छापेको छ । डलरको मुल्य उकालो लागेको र नेपाली रूपैयाँको अवमुल्यन भएको समयमा पनि सस्तो दरमा नोट छाप्नुलाई..
कांग्रेसबाट ७ मन्त्री थपिँदै, को–को बन्दै छन् ?
काठमाडौं । कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्रिपरिषदमा ७ राज्यमन्त्री थपिने भएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट ८ राज्यमन्त्री थप गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग गरेका थिए । तर,..
काठमाडौंका विद्यालयहरुमा बम विस्फोट
काठमाडौं । मंगलबार बिहानै काठमाडौंका तीनवटा निजी विद्यालयमा बम विस्फोट भएको छ । बिहानै काठमाडौंको जोरपाटीस्थित आकाशदिप माध्यमिक विद्यालय, मनकामना बोर्डिङ स्कुल र राई स्कुलमा बम विस्फोट भएको महानगरीय प्रहरी..
सकियो ४५ दिने घोषणा : ३०% भूकम्पपीडितले पाएनन् अनुदान
काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको ४५ दिने अवधीमा करिब ३० प्रतिशत भूकम्प पीडितले अनुदानको पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल आएलगत्तै साउन २० गते ४५ दिनभित्र सबै भूकम्प..
​भारतका चारजना अरौटेले भन्दैमा संविधान सं‌शोधन हुँदैन - पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली
भक्तपुर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको बताएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा युवा सङ्घ नेपाल २ नं क्षेत्रीय कमिटी भक्तपुरले..
​पाँच हजार निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्, अब के हन्छ कार्वाही ?
काठमाडौँ । यस आवमा चार हजार ८४८ निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। निजामती किताब खानामा चार हजार ८४८ निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको किताबखानाका निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद पराजुलीले जानकारी गराए। उनकाअनुसार..
​बसका सहचालकले फिर्ता गरे भेटेको १० तोला सुन, भने “म श्रम गरेर खान्छु, बेइमानी कहिल्यै पनि गर्दिन,”
पोखरा। स्याङजा सिर्सेकोट–९ निवासी केशरी अधिकारीले बसमा छोडेको १० तोला बराबरका सुनका गहनासहितको झोला बसका सहचालक चन्द्रबहादुर क्षेत्रीले फिर्ता गरेका छन् । भदौ २४ गते शुक्रबार माइती गल्याङबाट घर फर्कंदै गरेकी..
​पासपोर्ट हराएको विज्ञापन पत्रिकामा छाप्नु नपर्ने, प्रहरी रिपोर्ट पनि नचाहिने
काठमाडौं । पासपोर्ट हराए अब प्रहरीको रिपोर्ट लिन नपर्ने भएको छ। राहदानी विभागले सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था हाललाई हटाएको हो। प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी रिपोर्ट ल्याउने प्रक्रिया झन्झटिलो..
२ दिनभित्र ७ प्रदेशमा ७ उच्च अदालत
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्ले न्याय प्रशासन विधेयक, २०७३ पारित गरेसँगै सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ, आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएको छ । आइतबारको संसद् बैठकले उच्च..
अमेरिका जान हिँडेका नेपाली युवाको ग्वाटेमालामा यस्तो हालत
काठमाडौं । अमेरिका जान भनेर काठमाडौं हुँदै दिल्लीबाट भेनेजुयलाको भिसा हानेर पठायो, भेनेजुयलाबाट मेक्सिको जाने क्रममा त्यहाँको एयरपोर्टमा हामीलाई समातेर शरणार्थी शिविर पठाए, बल्लतल्ल छुट्यौं, केहीलाई दलालले कोठामा थुनेर राखेको..
भारतद्धारा सीमा क्षेत्रका डुबानपीडितलाई क्षतिपूर्ति अस्वीकार
काठमाडौं । सीमा क्षेत्रका डुबानपीडित नेपाली किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन नेपालका तर्फबाट राखिएको प्रस्ताव भारतले अस्वीकार गरेको छ । शुक्रबार भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा समपन्न दुवै देशका गृहसचिव स्तरीय बैठकमा नेपालले भारतीय बाँधका..
कुन दल कति धनी ?
काठमाडौं । राजनीतिक दल सञ्चालनको मुख्य स्रोतको रूपमा लेबीलाई लिने गरिएको छ । दैनिक क्रियाकलाप र पार्टी सञ्चालनका लागि लेबीलाई राजनीतिक दलहरूले मुख्य स्रोतका रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन् । घरभाडादेखि..
गोरखा पालुङटार नगरपालिका भित्र खेतीयोग्य जग्गा प्लटिङमा रोक
गोरखा । गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाभित्रका खेतीयोग्य जमिन मासेर घडेरी बिक्री गर्न प्लटिङ गरिएपछि पालुङटार नगरपालिकाले जग्गा प्लटिङमा रोक लगाएको छ। एकै वर्षमा तीनखेती हुँदै आएका समथर फाँट मासेर प्लटिङ गर्दै घडेरी..
भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रचण्डलाई सफलताको कामना सहित ओलीको ६ बुँदे सुझाव
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा दूरगामी प्रभाव पार्ने कुनै सम्झौता नगर्न आग्रह गरेका छन् । आइतवार बिहान पार्टीका..
काठमाडौँ । मासिक नाफा आधा अर्बभन्दा बढी पुगिसके पनि आयल निगमले इन्धन मूल्य घटाएको छैन । निगमले नै यस महिनाको नाफा ५६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ..
काठमाडौं । भूकम्पका क्षतिग्रस्त बनेको पशुपति परिसरका मठमन्दिर बनाउने जिम्मा भारतीयलाई दिने प्रस्ताव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले फिर्ता गरिदिएका छन् । पशुपति मन्दिर परिसरका २५ भन्दा बढी मठमन्दिर,..
काठमाडौ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचका विवादको कारण भूकम्पपीडितलाई सरकारले दिएको अनुदान रकम लिन जिल्ला सदरमकाम नै जानु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । पीडितलाई गाउमा अनुदान..
शंकर पोखरेलले के लेखे ? र डिलिट गरे ट्विट तर माफी मागेनन्
काठमाडौं । एमाले नेता शंकर पोखरेलले मंगलबार बिहान मधेसी जनता अधिकांश काला हुन्छन्, त्यसैले मधेसी मोर्चाले कालो दिवस मनाउँदै छ भनेर ट्विट गरेका थिए । आमसर्वसाधारणले मात्र होइन एमालेकै कार्यकर्ताले समेत..
काठमाडौं । अर्को महिना हुने भनिएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेपाल यात्रा स्थगित भएको छ । त्यो आशयको निर्णय हालै चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्ताईले तीन दिन पहिले नेपालका उच्च नेतृत्वलाई..
Results 1994: You are at page 43 of 67